Maninona no mifidy anay - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
Nongchuanggang Cross Border E-commerce (Weifang) Co. Ltd dia hiezaka ny hanangana ny ivon-toeram-pivarotana orinasa e-varotra eran-tany, ny ivon-toeram-piaraha-miasa sy ny serivisy fifanakalozana, ny foibem-pamokarana sy ny fanodinana, ny foibe fifanakalozana sy ny fizarana ary hahatsapa ny fampidirana am-pilaminana indostrialy marobe. Raisinay ny sehatra e-varotra miampita sisin-tany ho toy ny teboka fanombohana hampiroborobo ny fambolena avo lenta, ny firenena fanondranana kendrena dia misy an'i Japan sy Korea atsimo, Russia, Azia atsimo atsinanana, afrika atsimo, afovoany atsinanana, eropa ary amerika, Kanada, India. Ny asan'ny lampihazo dia manarona ny fitantanana ny filaminana, ny fifampiraharahana amin'ny filaharana, ny data Big customs, ny lojika iraisampirenena, ny fivarotan-trano any ivelany, sns. Namboarina ho an'ny filan'ny mpivarotra koa izany.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo loharanon-karena anatiny sy avy any ivelany amin'ny alàlan'ny ivon-toerana Big Data, dia nanangana sehatra e-varotra fanondranana ambaratonga marobe izy mba hahatratrarana ny docking marina eo amin'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Mamorona sy mampitombo ny maodely vaovao amin'ny e-varotra an-tsisintany. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tserasera marobe, ao an-trano sy any ivelany, ny fifangaroan'ny mpivarotra an-tserasera sy Alibaba, Jingdong, Taobao, T-mall, Pinduoduo, vahiny marobe an-tserasera miaraka amin'i Amazon, Aliexpress, Alibaba International, ny halalin'ny fiaraha-miasa, toy izany toy ny sehatra eBay miaraka amina fizotry ny varotra iraisam-pirenena tonga lafatra, manome orinasa miaraka amin'ny fitantanana fivarotana an-tserasera tokana, miaraka amin'izay hanokatra ny Akademia momba ny fambolena, serivisy maimaimpoana amin'ny fanomezana orinasa manana fahefana mamaky sisintany takiana mba hampandehanana ny asan'ireo karazana matihanina. fahalalana sy fahaizana.